Obbo Baqqalaa Garbaa Har’as Hidhaa Hin Baane
Onkoloolessa 31, 2017
Itti aanaa dura ta’aa Kongreesa Federaalawa Oromoo kan ta’an Obbo Baqqalaa Garbaa wabii qarshii kuma soddomaan akka hidhaa ba’an manni murtii Federaalaa kan walii-galaa kaleessa murteessuun isaa ni yaadatama.
Garu manni hidhaa qilinxoo gaaffii kaaseen Obbo Baqqalaa Garbaa har’a iyyu hin gadhiifamiin jiru.
Manni hidhaa Qiliinxoo akka jedhutti himannaa jalqaba obbo Baqqalaa Garbaa irratti dhiyaatee galmeen ittiin banamee kan shoroorkeessummaa ta’e ituu jiru murtiin kaleessa wabii qarshii kuma soddomaan akka ba’an itti ajajame garu yakka idilee waan ta’eef haa sirreefamu jedha.
Manni murtii waliigalaa deebii kennen himannaan shoroorkaa irraa kaafamuu fi yakka idileef immoo wabiin ba’uuf mirga akka qaban ibsuun xalayyaa ergee jira.
Manni hidhaa qilinxoo garu xalayaa kan biroo mana murtii isa jalqaba dhimmi Obbo Baqqalaa ilaalaa turetti dhimmicha deebisee jira.Abukaatoo obbo Baqalaa keessaa tokko kan ta’an Obbo Abduljabbar Huseen arguuf carraaqqiin goone hin milkoofne.
Gaaffii fi Deebii Obbo Mulaatuu Gammachuu waliin gaggeeffame caqasaa
Koollejjii Rifti Vaalii naannoo Gootaraatti Oromoo 1,000 oli Jijjigaa baqattetti itti qubate, nyaataa-dhugaatiilleen obboo Dinquu Dayyaasaatti gargaaruutti jira
Prezidaantiin Kutaa Kurdi Taayitaa Isaanii Gaadhiisuuf Murteessuu Isaanii Yunaayitid Isteets Galateeffatte
Abbaan-alangaa Mootummaa Speeyin Aangawoota Kaatalaan Himachuufi
Hogganaa Duula Nafiladhaa Traamp Ka Turan, Pawul 'Mootummaa Yunaayitid Iseets Irratti Shiran' Jechuun Himannaan Irratti Dhihaatee
Obbo Baqqalaa Garbaa Wabiin Akka Gadhiifamaniif Murteeffamee Jira
Yunivarsitii Odaa Bultuum Keessatti Kaleessa Balaan Ibiddaa Dhaqqabee Jira